Google Analytics: Yakakosha Meta Metrics yeKugadzira Zvemukati | Martech Zone
izwi content marketing zviri nani kubuzzworthy mazuva ano. Vazhinji vatungamiriri vemakambani nevatengesi vanoziva kuti vanofanirwa kunge vachiita kushambadzira zvirimo, uye vazhinji vaenda kusvika pakugadzira nekushandisa zano.
Nyaya yakatarisana nevazhinji vekushambadzira ndeye:
Isu tinoteedzera sei uye kuyera kushambadzira zvemukati?
Isu tese tinoziva kuti kuudza timu yeC-Suite kuti isu tinofanirwa kutanga kana kuenderera kushambadzira zvemukati nekuti vamwe vese vari kuzviita hazvingazvigure. Kune akati wandei akakosha emametric anopa ruzivo mune zvemukati zvekushambadzira kuyedza, chii chiri kushanda, chii chisiri kushanda, uye uko kune mhedzisiro.
Kunyangwe hazvo zano rako redhijitari rinosanganisira yakajeka yekushambadzira zano, iwe zvachose unofanirwa kunge uchiteedzera yako yakasimba webhusaiti mashandiro. Iyo webhusaiti ndiyo musimboti wezve chero zvemukati zvekushambadzira zano, kunyangwe iro zano riri kungotanga kana kukura.
Google Analytics chishandiso chiri nyore chekumisikidza chekumisikidza uye inopa yakawanda yekushanda uye ruzivo. Zviri mahara, zviri nyore gadzira Google Analytics, uye inogonesa vatengesi kuteedzera zvemukati uye kuongorora kuti zvirimo zvirikuita sei.
Paunenge uchiongorora zvemukati zvekushambadzira zano (kana kugadzirira kugadzira zano), zvakanaka kutanga nezvakakosha - general traffic kune ewebhusaiti mapeji. Chirevo ichi chiri pasi Maitiro> Zvemukati Zvemukati> Mapeji ese.
Iyo metric huru pano ihwo huwandu hweshure hwekushanya kumapeji epamusoro. Iyo peji rekumba ndiyo inogara ichinyanya kushanyirwa, asi zvinonakidza kuona izvo zvinowana traffic yakawanda kupfuura iyoyo. Kana iwe uine rakakura blogging zano (5+ makore), mablog anogona angangove anotevera anonyanya kushanyirwa mapeji. Ino inzvimbo huru yekuona kuti zvemukati zvinoita sei pane yakatarwa nguva furu (vhiki, mwedzi kana kunyange makore).
Ivhareji yenguva yenguva vashanyi yavanoshandisa pane peji inopa ruzivo rwekuti peji iri kuita here.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iwo anonyanya kushanyirwa mapeji haagari ari anonyanya kuita mapeji. Ronga neiyo Avg. Nguva paPeji kuti uone kuti ndeapi mapeji ane nguva yepamusoro yakashandiswa papeji. Iwo mapeji ane yakaderera peji kutarisisa (2, 3, 4) inogona kutariswa zvakanyanya sekusanzwisisika. Nekudaro, iwo anonakidza iwo iwo mapeji ane anopfuura makumi maviri+ maonero.
Sezvo iwe uchisarudza kuti ndeapi misoro yekuisa mune yako zvemukati yekushambadzira edhisheni khalenda, zvakakosha kutarisa kuti ndeapi mapeji anowana huwandu hwakawanda hwetraffic (inozivikanwa) uye ndeapi mapeji ane yakakwira nguva pamapeji (ari kuita). Sezvineiwo, yako yekunyora khalenda inofanirwa kuve mubatanidzwa wezvose zviri zviviri.
Kunyange isu tichigona kuwana granular mukati Tracking uye kuyera kushambadzira kuyedza, zvakakosha kuti urangarire kuti zano reshambadziro nzira kutyaira uye kushandura nyowani yemutengi inotungamira. Shanduko dzinogona kuteverwa uchishandisa zvinangwa muGoogle Analytics pasi Admin> Wona.
Google Analytics inobvumira chete zvibodzwa makumi maviri kuti zviteedzwe panguva, saka shandisa izvi zvine hungwaru. Maitiro akanakisa ndeekutarisa epamhepo fomu kutumira, tsamba yemasaini kusaina-kumusoro, chena mapepa kurodha pasi, uye chero chimwe chiito chinoratidza kutendeuka kwemushanyi webhusaiti mune anogona mutengi.
Zvinangwa zvinogona kutariswa pasi Shanduko> Zvinangwa> Ongororo muGoogle Analytics. Izvi zvinopa muongororwo wakawanda wekuti zvemukati zvidimbu uye mapeji arikuitisa yekutyaira inotungamira.
Traffic Chitubu uye Pakati
Traffic Sosi uye Pakati ndeyakakura metric yekuzivisa pamusoro pekuti traffic iri kusvika sei kune yako webhusaiti uye zvemukati mapeji. Aya manhamba akakosha zvakanyanya kana iwe uchimhanyisa zvakakwidziridzwa paSource senge Google Ads, LinkedIn, Facebook, Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira netiweki, kana mamwe mawebhusaiti ekushambadzira. Mazhinji eaya akabhadharwa nzira dzekusimudzira dzinopa dhibhodhi remetriki (uye inopa mapikisheni ekutevera), asi sosi yakanaka kwazvo yeruzivo rwechokwadi inowanikwa muGoogle Analytics.
Dzidza iko kutendeuka kwako kuri kubva kune chimwe nechimwe chinangwa nekutarisa pa Shanduko> Zvinangwa> Chinangwa Kuyerera chirevo. Unogona kusarudza Chinangwa chaunoda kutarisa uye iyo Sosi / Medium yeiyo chinangwa kupedzisa (kutendeuka) Izvi zvinokuudza kuti mangani eaya anotungamira akauya kubva kuGoogle Organic, Direct, CPC, LinkedIn, Bing CPC, nezvimwe.
Kutarisa kwakapamhamha kuti masosi akasiyana siyana ari kukanganisa sei kwako kwese kushambadzira kwekushambadzira kunogona kuwanikwa pasi Kuwana> Yese Traffic> Kunobva / Pakati.
Chirevo ichi chinogonesa mushambadzi kuti aone izvo Source neMediums vari kutyaira yakanyanya kuwanda shanduko yechinangwa. Pamusoro pezvo, chirevo chinogona kushandisirwa kuratidza panoshanduka shanduko kubva kune chimwe nechimwe chinangwa (chakafanana neGoal Flow report). Ive neshuwa yekutarisa mapeji / chikamu, Avg. Nguva yeSession, uye Bounce Rate yemapeji aya futi.
Kana Sosi / Medium ine yakaderera kutendeuka mwero, akaderera mapeji / chikamu, murombo Avg. Chikamu cheSession uye yakakwira bounce mwero, inguva yekutarisa kana icho Chitubu / Pakati chiri chakakodzera kudyara kwenguva nezviwanikwa.
Kunze kweGoogle Analytics, kune huwandu hwenhumbi dzakabhadharwa ku tevedzera SEO uye keyword kuera. Keyword masosi anobatsira kuona kuti ndezvipi zvidimbu zvemukati zvekugadzira uye ndevapi vangangoita vatengi vari kutsvaga kana vari online. Ive neshuwa yekubatanidza yako Google Search Console account neGoogle Analytics. Webmasters vanogona kupa imwe tsananguro pane ayo akakosha mazwi ari kutyaira organic traffic kune yako saiti.
Zvimwe zvakaomesesa SEO zvishandiso zvinosanganisira Semrush, gShift, Ahrefs, BrightEdge, kondakita, uye Moz. Kana iwe uchida kusimudzira masosi emamwe mazwi akakosha (uye uwane yakawanda traffic yemashoko iwayo), hunyanzvi uye kusimudzira zvemukati zvakakomberedza aya mazwi.
Ndeapi mashumo uye metric aunoshandisa kuongorora uye kuzivisa yako yemukati yekutengesa zano?
Yekukumbirwa kana Kubhadharwa Ongororo ndeyeKuongorora Kunotyisa